तपाईंलाई थाहा छ ? यौ’न स’म्प’र्कका लागि प्रयोग हुने क’ण्ड’म बनाइन्छ नागबेली झारबाट – Ujyaalo Patrika
तपाईंलाई थाहा छ ? यौ’न स’म्प’र्कका लागि प्रयोग हुने क’ण्ड’म बनाइन्छ नागबेली झारबाट
नागबेली झारबाट कस्मेटिक सामान, यौ’न सम्पर्कका लागि प्रयोग हुने क’ण्डम लगायतका सामान पनि बनाईन्छ । र पछिल्लो समय यसको राम्रै खरिदबिक्री पनि हुन थालेको छ । वनमा खेर गइरहेको नागबेली झारबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि पर्वतको उत्तरी क्षेत्रका बासिन्दा नागबेली सङ्कलनमा व्यस्त छन् ।
जिल्लाका वनौँ, क्याङ, लेखफाँटलगायत गाविसका बासिन्दा नागबेली सङ्कलनमा जुटेका हुन् । स्थानीय वनमा प्रसस्त मात्रामा पाइने नागबेली झारको उपयोगिता बुझ्दै गएपछि उपभोक्ताले सामूहिक रुपमा नागबेली सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्न थालेका छन् । विगतमा त्यत्तिकै कुहिएर गएको नागबेली अहिले यस क्षेत्रका उपभोक्ताका लागि आम्दानीको गतिलो स्रोत बनेको छ ।
विदेशमा निर्यात हुने नागबेली झारको कोसाबाट निस्कने मसिनो पाउडरबाट यौ’न सम्पर्कका लागि प्रयोग हुने क’ण्डम, अस्पतालमा प्रयोग गरिने पातला प्लास्टिकका सामान, ब्युटीपार्लरका सामान, पाउडरलगायत निर्माण हुने बताइएको छ ।
Previous विश्वको एक अनौठो घ ट ना : बगीरहेको नदी ४ दिनमा नै एक्कासी गायव भएपछि हंगामा . .
Next सेकेन्ड ह्याण्ड बाइक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ : मौकाको फाइदा उठाउनुहोस ।